Incubator:Bogga Hore - Wikimedia Incubator
Kusoo dhowoow aaladda Wikimdia
Kani waa Aaladda Wikimedia, ee suura galisay mashaariicda Wikimedia ee wiki in luqad cusb ee ah Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary iyo Wikivoyage waana lakala hor marin karaa, qorista, tijaabo iyo sugidda iyo xaqiijinta ee uu soo casuumay Muasasada Wikimedia.
Inkastoo tijaabada wiki ee Wikimedia xannaaneeyaha ma lahan boos u gaar ah, laakiin waad aqrin kartaa waxna ka bedeli kartaa sida kuwa kale ee mashaariicda wikimedia ee wiki.
Nuqulka luqadaha cusub ee Wikiversity waa in aad u weecataa Beta Wikiversity, iyo dhammaan mid kasta oo ka mid ah Wikisource ilaa Old Wikisource.
Halkaan ka ma bilaabi kartid wax mashruuc ah gabi ahaanba, waxaa kaliya oo aad bilaabi kartaa luqad cusb ee ka mid ah mashruuca jira.
Halkaan waxaad ka helaysaa ololeyaasha Wikiyaasha:
Si aad u hesho liiska oo dhan wikiyaasha ee Aaladda Wikimedia, eeg Incubator:Wikis.
Sidee u bilaabi kartaa tijaabo cusub ee wiki wararka?
Hadii aad halkaan utimid inaad biloowdid luqad cusub ee mashruuca, waxaad dhamaan macluumaad ka helei kartaan halkaan Caawinaad:Qoraal. Fadlan ahaaw mid aqoon uleh arimaha Siyaasad.
Waxaa ubaahneed Furaha luqadda (Faahdfaahin Caawinaad). hadii aadan samayn, waad diyaarin kartaa, ama soo booqo Aalaad dheeraad.
Bilaabidda wikiga wararka macnaheedu maaha waqtiyada soo socda ayuu noqon doonaa mid iskiis ushaqeeya ama adeegsiga wikimedia; Waxaad ubaahantahay in laga aqbalo ugu horayn Gudiga luqadaha . eeg Codsiga luqad cusb Macluumaad dheeraad ah.
Faldan dhow heshiisyeda magacaabida luqadda wararka, Si aad u caawido bogga cidlada ah mashruuca wiki dhabta ah. dhamaan wararka bogga (Haba ku sii jiree template-yada iyo Qaybaha) waxa ay ubaahanyihiin in lagu magacaabo Mideyn (adigoo adeegsanaya prefix — ugu yeraan furaha luqadda; kor fiiri) iyo si joogta ah.
Sidee uga qayb qaadan kartaan aaladda wiki wararka?
Hadii aad aqoon uleedahay luqadaan ee hadda ku hor taal wikiga wararka way kugu dhiirri galainaysaa inaad gacan ka gaysato wikiga wararka.
Fadlan bogagga aad samaysay sii fure gaaban. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan furaha.
IRC Kanaal #Aaladda-wikimedia (chat banaanka ah)
Mashruuyada walaalaha la ah
Muasasada Wikimedia Waxa ay la shaqaysaa Luqado badan iyo free-content Mashaariic:
Insakolobedia xor ah Wiktionary
Qaamuus Iyo Kalamado isku beegma Wikisource
Maktabad waxeeda xor ah Wikiquote
Qaybo ka mid xigashada
Buugaag daraasadeed iyo tusaalooyin bilaash ah Wikinews
Waa ku xirnaanta warar xor ah Wikiversity
Maadooyin wax barasho bilaash ah. Wikivoyage
Si xoriyad ah inaad u dhax mushaaxdo Internetka
Liiska tusaalooyinka Wikidata
Aaska aqoonta xorta ah Wikimedia Commons
Xarun ay ku mideeysan yihiin war isgaarsiinta Meta-Wiki
Mashruuca Wikimedia ee isku xiraha
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Incubator:Main_Page/so&oldid=5314163"